အနိုင်မခံ | Sanchaung Journal
ဒီဘာသာပြန် ကဗျာဟာ Invictus ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကဗျာကို မြန်မာမှု ပြုထားတဲ့ နာမည်ကျော် အနိုင်မခံ ဆိုတဲ့ ကဗျာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းနဲ့ ဘာသာပြန်ကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ မူရင်းကဗျာကို သိပ်မခံစားရပေမယ် မြန်မာပြန်ကတော့ အရမ်းကို မြန်မာ့လေနဲ့ ဟပ်နေပြီး ထိမိတဲ့စကားလုံးတွေကို အကောင်းဆုံး အပြောင်မြောက်ဆုံး အသုံးပြုထားနိုင်တာ တွေ့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကဗျာကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရေးတယ်၊ ညိုမြရေးတယ်ဆိုပြီး အယူအဆ ကွဲနေကြတာကိုလည်း တွေ့ ရပါတယ်။
ချင်းတွင်းချစ်သွေးကတော့ Invictus ကဗျာဘာသာပြန် အနိုင်မခံကို မူရင်းနဲ့ ဘာသာပြန် တစ်ကြောင်းစီ ယှဉ်ဖတ်ပြပြီး ကိုညိုမြရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ စကားလုံး ရွေးချယ်သုံးနှုန်းပုံတွေကို ချီးကျုးအံ့ဩသွားပါတယ်။
(ညိုမြကိုလွမ်းသူတို့ရဲ့ပွဲ၊ လွမ်းသူ့စာ၊ လူထုဒေါ်အမာ၊ စာ ၁၈၆)
ခေါင်းကြီးဆိုတာ ဘယ်လိုရေးရတာလဲလို့ သူ့ကို ကျွန်မက ပြန်မေးတယ်။ ကိုညိုမြက အဆောင်ပြန်သွားပြီး အဲဒီ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအတွက် သူရေးထားတဲ့ အနိုင်မခံဆိုတဲ့ ခေါင်းကြီး စာပုံနှိပ်တိုက်က လက်ပရုဖ် ရိုက်ပေးထားတာကို ယူလာပြီး ခေါင်းကြီးဆိုတာ ဒါမျိုး ရေးရတာပဲ၊ ဒါကိုဖတ်ကြည့်တဲ့။ သူ့ခေါင်းကြီးက ကောင်းပါတယ်။ နောင်အခါထိ ကျော်ကြားတဲ့ ခေါင်းကြီးပါ။
(ကိုညိုမြ၊ လွမ်းသူ့စာ၊ လူထုဒေါ်အမာ၊ စာ ၁၈၀)
ဦးညိုမြသည် ကျွန်တော့်ရုံးသို့ စာအုပ်အငှားအရမ်း ရောက်တတ်လေသည်။ ဤတွင် ထိုအနိုင်မခံ စာအကြောင်း စကားစပ်မိကြရာ သူက အောက်ပါအတိုက် မှတ်စု ရေးပေးလိုက်ပါသည်။ ၁၉၃၆ခု တက္ကသိုလ်သပိတ်ကြီး အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၃ရခုနှစ်တွင် ကျွန်တော်သည် တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ မဂ္ဂဇင်း (အိုးဝေ)ကို တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာအဖြစ် ကိုအောင်ဆန်း နေရာကို ဆက်ခံခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်က အိုးဝေခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် (အနိုင်မခံ)ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားပါရှိခဲ့ရာ ထိုစာမှာ W.E. Henley ခေါ် အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ ရေးသားသည့် Invictus ဟူသောကဗျာကို မှီး၍ ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်က ကျွန်တော်သည် တက္ကသိုလ် ထမင်းစားခန်း၌ ဆရာဇော်ဂျီ၊ ဆရာမင်းသုဝဏ်တို့နှင့် တစားပွဲတည်းအတူ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်းပါသည်) ထမင်းစားခဲ့ရာ မင်းသုဝဏ်က ကျွန်တော်၏ စာမူကို တည်းဖြတ် အချောကိုင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ညိုမြ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၁၉၇၉
(အနိုင်မခံစာ၊ စာရေးစားပွဲပေါ်မှပုံရိပ်များ၊ တိုက်စိုး၊ စာ ၄၃)
ယင်းကဗျာကို သခင်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် ရေးသားကြောင်းကို ကျွန်တော်ရဲရဲကြီး ထောက်ခံတင်ပြလိုပါသည်။ …. တစ်နေ့သော် သခင်အောင်ဆန်းက ကိုချမ်းမြ Captain of the Soul ကို ခင်ဗျား ဘယ်လိုပြန်မလဲဟု မေးပါသည်။ ကျွန်တော်က ပေါရာဏစကားမှာတော့ ကပ္ပတိန်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရမျိုးကို ထမုန်သူကြီးဟူ၍ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မာလိန်မှူးဆိုရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် ထင်တယ်ဟူ၍ ပြန်ဖြေလိုက်ပါသည်။ ဤဝေါဟာရကို လည်း သခင်အောင်ဆန်းက သဘောမကျသူပါ။ မကြိုက်သေးဘူးဗျာ၊ လူတိုင်းနားလည်နိုင်မှ ကောင်းမှာဟူ၍ပြောပြီး သူ၏ မှတ်စုအကြမ်းစာအုပ်ထဲတွင် ယင်းကဗျာ ဘာသာပြန်ကို ရေးခြစ်လိုက် ဖျက်လိုက် လုပ်နေသည်ကိုပင် တွေ့ ရပါသည်။ … ခေါင်းကြီးပိုင်းကို ရေးသားသူ၏ အမည်မှာ မဂ္ဂဇင်းတို့ ၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ပါလေ့ပါထ မရှိကြပါ။ ခေါင်းကြီးပိုင်းကို တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာများကသာလျှင် ရေးသားကြရစမြဲ ဖြစ်ပါသည်။
(သခင်အောင်ဆန်းနှင့် သူ့ကဗျာ သူ့နိမိတ်၊ နှောင်းခေတ်တက္ကသိုလ်ဘဝမှတ်တမ်းများ၊ မြကေတု)
ဒါကတော့ ၁၉၃၆ခုနှစ် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၆) အမှတ် (၁) ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ ပါလာတဲ့ အနိုင်မခံဆိုတဲ့ စာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ထင်ရှားတဲ့ စာပေပညာရှင်တွေရဲ့ ကွဲပြားတဲ့ ထင်မြင်ချက်အချို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာကိုပဲ တက္ကသိုလ် ရွှေရတု နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်း မှာလည်း ထပ်မံ ထည့်သွင်းထားတာ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတော့ ဒီကဗျာ ကျွန်တော် ရေးခဲ့တယ်လို့ မပြောခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ညိုမြကတော့ ဆရာတိုက်စိုးကို အထက်ကလို မှတ်ချက်လေး ရေးပေးသွားတယ်။ ဒါဟာ သူရေးတယ်လို့ ဝန်ခံထားတဲ့ သဘောပါပဲ။ ၁၉၃၅-၃၆ ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ မဂ္ဂဇင်း တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာက သခင်အောင်ဆန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ညိုမြရဲ့ ငရဲခွေးကြီး လွတ်လာပြီ ဆိုတဲ့ စာမူကို ဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတာ သခင်အောင်ဆန်းက ထုတ်ဖော်မပြောတာမို့ သခင်အောင်ဆန်းကို ကျောင်းထုတ်ပစ်ရာက ၁၉၃၆ တက္ကသိုလ် သပိတ်ကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ရတာပါ။ ၃၆-၃၇ မှာတော့ ညိုမြက သခင်အောင်ဆန်းနေရာ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဆရာညိုမြလို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ သူမရေးတဲ့စာကို သူရေးတယ်လို့ ပြောမှာ မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုက ညိုမြရေးထားတဲ့စာကို အယ်ဒီတာဖြစ်တဲ့ သခင်အောင်ဆန်းက သဘောကျပြီး ခေါင်းကြီးအနေနဲ့ ထည့်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ် ဗိုလ်ချုပ်ရေးတဲ့စာကို ညိုမြက ကူညီပြင်ဆင်ပေးတာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သော စကားလုံး အသွားအလာ အသုံးအနှုန်းကို အယ်ဒီတာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆန်းစစ် ပြုပြင်တာမျိုး ဖြည့်စွက်တာမျိုးတော့ စာရေးသူနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လူထုဒေါ်အမာ ကိုယ်တိုင်လည်း ပရုဖ်ဖတ်ထားတဲ့ လက်ရေးမူကို မြင်ဖူးတယ်လို့ ဆိုထားလေတော့ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာဟာ အလွန်တရာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတာ တိကျတဲ့ သမိုင်းနောက်ခံ ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒွိဟ ဖြစ်ရတဲ့ နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်လေတော့ အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကြောင်းအရာများ၊ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေဦးမယ့် ဆရာကြီးများကို မေးမြန်းပြီးတော့ တိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခုကို ပြဌာန်းသင့်နေပါပြီ။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေ မထားပဲ ဒီလောက် လေးနက် ပီပြင် ကောင်းမွန်လွန်းတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကို ဘယ်သူရေးသားခဲ့တယ်ဆိုတာ အမှန်အတိုင်း သိမယ်ဆိုရင်ပဲ ဒီစာရဲ့တန်ဖိုးဟာ ပိုပြီး မြင့်မားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရော ဒီစာကို ဘယ်သူရေးတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ၊ သိထားပါသလဲ။
ကိုညီလင်းဆက် ရဲ့ blog မှ ရယူထားပါတယ်။ ကိုညီလင်းဆက်သည် သုတေသန လေ့လာရာတွင် ထင်ရှားသော လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။
သူ ရဲ့ လေ့လာမှုကို လေးစားမှုတာက တစ်ကြောင်း၊ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သိသင့်တဲ့ ဗဟုသုတ ဖြစ်နေတာကတစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Previous Postတစ်ကြိမ်အောင်မြင်ရင် ရပြီNext Postစိတ်အကွာအဝေး